दशैँका लागि खसीबोका बिक्री भोलिदेखि, कति पर्छ किलोको ? - Nepal Daily
दशैँका लागि खसीबोका बिक्री भोलिदेखि, कति पर्छ किलोको ?
शुक्रबार, २२ असोज २०७८, ०९ : २६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैँका लागि भोलिदेखि मात्रै खसीबोका बिक्री गर्ने भएको छ ।आजदेखि खसीबोका बिक्री गर्ने भनिए पनि मूल्य निर्धारण नभएकाले भोलिदेखि मात्रै बिक्री गर्ने तयारी भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आज दिउँसो मूल्य निर्धारण गरेर भोलिदेखि बिक्री थालिने छ । खाद्यले बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ सस्तोमा खसी बोका बेच्ने छ । दशैँका लागि दाङ, मकवानपुर लगायतका ठाउँबाट ल्याइएका खसीबोका कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा राखिएको छ ।
खनालका अनुसार हिजो बेलुकासम्ममा दाङबाट एक सय ९० वटा खसीबोका ल्याइएको छ । यो पहिलो खेप हो । दाङबाट जम्मा ८ सय खसीबोका ल्याउने योजना छ । मकवानपुरबाट भने आज बिहानदेखि मात्रै खसीबोका ल्याउन थालिएको छ । मकवानपुरबाट एक हजार दुई सय खसीबोका काठमाण्डौ ल्याइनेछ । खाद्यले प्रतिकिलो ५ सय ४५ देखि पाँच सय ६५ रुपैयाँमा खसीबोका खरिद गरेको छ । खरिद दरमा किलोका १० रुपैया बढाएर बेच्ने तयारी गरिएको बताइन्छ ।
नेप्सेमा २७.५१ अंककाे वृद्धि
आज बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
सर्वाेच्च र जनताले नै काम गर्न दिएनन्ः कुलमान घिसिङ
आज कतिमा भैरहेछ सुन चाँदीको कारोबार ?
इच्छाराज तामाङलाई १८ दिन थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु
नेप्सेमा झण्डै १५ अंकको गिरावट